Ndo Juana Ines De La Cruz. Afọ ncheta nke ọmụmụ ya. Poems 4 | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ndo Juana Ines De La Cruz. Afọ ncheta nke ọmụmụ ya. 4 sonnet
Onye isi okwu Juana Inés de la Cruz A mụrụ ya n'ụbọchị dị ka taa na San Miguel Nepantla, obodo dị na Mexico, na 1651, ọ bụ ezie na 1648 pụtara na ebe ndị ọzọ. A na-ahụta ya dịka otu n'ime ndị edemede Mexico a maara nke ọma na narị afọ nke iri na asaa. Ọnọdụ ya dị ka onye nọn, nke na-esiteghị na ntinye ofufe ma ọ bụ ọkpụkpọ Chineke, metụtara ya na ọchịchọ nọgide na-azụlite ihe omume ntụrụndụ gị na ikike ọgụgụ isi gị. Nke a bụ M na-echeta ya ọgụgụ na-arụ ọrụ nke m na-esi apụta 4 nke sonnets ya.
1 Onye isi okwu Juana Inés de la Cruz
1.1 Ebe owuwu
2 4 pụtara ìhè sonnets
2.1 Gbalịa ịgọnahụ otito ahụ
2.2 Nke a eriri echiche
2.3 Nke ahụ na-akasi anyaụfụ
2.4 Hụnanya etinyela ya n’isiokwu na-erughị eru
Onye isi okwu Juana Inés de la Cruz
Ha na-ekwu na mgbe m dị afọ atọ, amatala m ya gụọ ma dee. Nke a dugara ya na ya inwe mmekọrịta dị ukwuu na ọkwa kachasị elu nke ụlọ ikpe nke Nnọchiteanya nke Spain. Ma na 16 afọ banyere Gbasara carmelites nke Mexico na mgbe e mesịrị na Iwu nke Saint Jerome, ebe ọ dị mgbe niile. Nwere nkwado na nkwado nke ndị nnọchi anya dị iche iche onye o raara otutu otutu abu ya.
N'ime ọrụ edemede ya ọ zụlitere abụ, nke kpuchiri ọtụtụ n'ime ya, na sacramental auto, ụlọ ihe nkiri na prose. Stylekpụrụ ya na-echeta ma na-ejikọ na aha ndị dị ka nke Góngora, Lope de Vega ma ọ bụ Quevedo. Ka emechara, ha niile bụ nke Afọ ndụ edo. Ma sor Juana guzoro maka ịchọ ibuli ọrụ nke ụmụ nwanyị elu nke oge ya karịa ka a ga-ekenye ya n'ụlọ na ezinụlọ.
Dramatic: Celestina nke abụọ, Mgbalị nke ụlọ, Ishụnanya kariri maze
Carsgbọ oriri nke sacrament: Chineke Narcissus, Mkpanaka Josef Onye nwụrụ n'ihi okwukwe nke sacramenna
prose: Nhazi Neptune, Akwụkwọ ozi Athenagore, Zaghachi Sr. Filotea de la Cruz, Mkpesa nke okwukwe, loasi na villancicos
4 pụtara ìhè sonnets
Gbalịa ịgọnahụ otito ahụ
Nke a na ị na-ahụ, yi aghụghọ,
na, na nka na-egosi mma,
ya na ugha nke agba
ọ bụ akpachapụ anya na aghụghọ nke uche;
onye a onye ire otuto ya mere
gbaghara ihe ojoo di na aho
na imeri ihe isi ike nke oge
mmeri site na agadi na nchefu:
ọ bụ ihe efu n'efu arịa nlekọta;
ọ bụ ifuru na ifufe siri ike;
ọ bụ ebe mgbaba n'efu maka akara aka;
ọ bụ nzuzu njehie uchu;
Ọ bụ ọchịchọ ochie, na, ihe niile echebara,
ọ bụ ozu, ọ bụ aja, ọ bụ onyinyo, ọ nweghị ihe ọ bụ.
Nke a eriri echiche
Na ihe mgbu ọnya efu,
nke iwe banyere ịhụnanya m kwara arịrị,
na ịhụ ma ọnwụ ga-abịa
Agbalịrị m ime ka ọ buru ibu.
Niile dị njọ, mkpụrụ obi na-atọ ọchị,
iru uju maka iru uju ya mgbu kwukwara,
a na-atụgharịkwa uche n'ọnọdụ nke ọ bụla
na e nwere otu puku ọnwụ na ndụ otu onye.
Na mgbe, ka otiti nke onye ọzọ gbara
nyefere obi, nye mgbu
ihe ịrịba ama nke iku ume ikpeazụ,
Amaghị m na ihe ga-emezu akara aka
Agaghachiri m na nkwekọrịta m wee sị: kedu ihe na-amasị m?
Nye ka nwee obi ụtọ karịa n'ịhụnanya?
Nke ahụ na-akasi anyaụfụ
Hụnanya malitere na enweghi obi iru ala,
ịrịọ arịrịọ, ardors na ụra;
ọ na-eto eto na ihe egwu, nsogbu na nhụsianya;
jigide na-akwa ákwá na ịrịọ arịrịọ.
Kuziere ya ịdị andara detara na nkwụsị,
chebe ịbụ n'etiti mkpuchi aghụghọ,
rue mgbe iwe ga-ewe ya ma ọ bụ jiri ekworo
na-etinye anya ya ọkụ na anya mmiri ya.
Mmalite ya, etiti na njedebe bụ nke a:
Gini mere, Alcino, ị na-eche ọbịbịa
nke Celia, kedụ oge ọzọ ị hụrụ n'anya nke ọma?
Kedu ihe kpatara enwere mgbu na-efu gị?
,Hụnanya m, Alcino, aghọgbughị gị,
mana okwu ahuru rutere.
Hụnanya etinyela ya n’isiokwu na-erughị eru
Mgbe m hụrụ mmejọ m na omume rụrụ arụ gị,
Echere m, Silvio, banyere ịhụnanya m hiere ụzọ,
le ka nmebi nmehie si di
otú ike nke ọchịchọ.
Echeta m na o siri ike m kwere
nke ahụ nwere ike dabara na nlekọta m
akara ikpeazụ nke ndị e ledara anya,
okwu ikpe azu banyere oru ojoo.
Ọ ga-amasị m, mgbe m ga-ahụ gị,
ahuru ihu-n'anya nke aham n’enwe ike ịgọnarị ya;
ma mgbe ahụ, naanị ihe kpatara ya na-adọ m aka ná ntị
na naanị ịgba akwụkwọ m na-ebipụta ya;
n'ihi oke mpụ ịhụ gị n'anya
Ọ bụ ihe nwute zuru oke ikwupụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Abụọ » Sor Juana Inés de la Cruz. Ememe ncheta ọmụmụ ya. 4 sonnets